China Deep Groove Ball Ukunikela mveliso kunye nabenzi | Kancinci Yong
Shandong qianyong Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. kuyinto yenzululwazi kunye nobuchwepheshe ethwele umenzi elidibanayo R & D, imveliso kunye neentengiso. Yayisungulwa ngo-1987 kwaye ibhaliswe njenge Shandong qianyong Rhweba ngaphakathi no Rhweba ngaphandle Co., Ltd. ngo-2019, ikakhulu lijongana non-standard, iibheringi ezizodwa kunye jikelele.
Ukuthwala okunzulu kwebhola emseleni lolona hlobo luqhelekileyo lokuthwala. Isiseko sebhola ye-groove esisiseko esine-ring yangaphandle, isangqa sangaphakathi, iseti yeebhola zentsimbi kunye neseti yokugcina isakhelo. Ubume bayo bulula, kulula ukuyisebenzisa, yeyona mveliso ixhaphakileyo, lolona hlobo lusetyenziswayo lokuthwala. Iibheringi zebhola emseleni enokusetyenziswa kwizixhobo ezichanekileyo, iibhokisi zegiya, izixhobo, iinjini, izixhobo zekhaya, iinjini zokutsha zangaphakathi, izithuthi zothutho, oomatshini bezolimo, oomatshini bokwakha, oomatshini bobunjineli, yo yo, njl.
Zimbini iintlobo zeebheringi zebhola e-groove enzulu: umqolo omnye kunye nomqolo ophindwe kabini. Ubume bebhola enzulu ye-groove yahlulwe yatywina kunye nolwakhiwo oluvulekileyo. Uhlobo oluvulekileyo luthetha ukuba ukuthwala akunasakhiwo sokutywina, kwaye ibhola etywiniweyo enzulu ye-groove yahlulwe yatywina nothuli kunye nobungqina beoyile. Izinto ezikwitywina lokutywina uthuli isitampu yentsimbi yokunyathela, enokuthintela kuphela uthuli ekungeneni kuthwele umendo. Uhlobo lobungqina beoyile litywina leoyile lokudibana, elinokuthintela ngokufanelekileyo igrisi ekuphatheni.
Ubunzulu be-groove ibhola ethweleyo yeyokuzahlula okungahambelaniyo, isakhiwo sayo silula, kwaye sisetyenziswa ngokubanzi. Ukongeza kuhlobo olusisiseko, ibhola ene-groove enzulu ikwanezinto ezahlukeneyo ezahlukeneyo, ezinje: ibhola ebanzi ye-groove ethwele isiciko sothuli, ibhola emseleni enendawo yokuthwala iringi yokutywinwa kwerabha, ibhola emseleni webhola ethwele indawo yokuma, ibhola egcweleyo Ukuthwala umthwalo omkhulu wokulayisha kunye nesithuba sokulayisha ibhola.
I-groove ibhola enzulu ethwele ikakhulu umthwalo we-radial, kodwa ikwanokuthwala zombini umthwalo kunye nomthwalo we-axial. Kufanelekile ukusebenza ngesantya esiphezulu. Xa ithwala kuphela umthwalo we-radial, i-angle yoqhagamshelo ayi-zero. Xa ibhola yamanzi enzonzobila ethweleyo inokususwa okukhulu kwiradial, inentsebenzo ye-angular bearing bearing kwaye inokuthwala umthwalo omkhulu we-axial. Umlingani wokungqubana kwebhola ye-groove ethweleyo incinci kakhulu kwaye isantya somda siphezulu, kodwa asifanelekanga ukuba sithwale umthwalo onzima. Xa ukucoca i-radial kukhulu, i-axial bearing capacity inyuswe, kwaye i-angle yoqhakamshelwano inguzero phantsi kwamandla anyulu e-radial. Xa kukho i-axial force, i-angle yokudibanisa inkulu kune-zero.
I-groove ibhola enzulu ethwele ikakhulu umthwalo we-radial, kodwa ikwanokuthwala zombini umthwalo kunye nomthwalo we-axial. Xa ithwala kuphela umthwalo we-radial, i-angle yoqhagamshelo ayi-zero. Xa ibhola yamanzi enzonzobila ethweleyo inokususwa okukhulu kwiradial, inentsebenzo ye-angular bearing bearing kwaye inokuthwala umthwalo omkhulu we-axial. Umlingani wokungqubana kwebhola ye-groove ethweleyo incinci kakhulu kwaye isantya somda siphezulu kakhulu.
Okulandelayo: Ukunikela iHub
QYBZ Deep Groove Ball Ukunikela I